Trapezoid diamond pads Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa | China Trapezoid diamond pads Factory
Ugboro abụọ gburugburu akụkụ trapezoid concrete egweri akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ ndị a na-egweri ola diamond dị okirikiri dị mma maka ichicha nke ọma na ịkwadebe ala maka polishing. The okpukpu abụọ nke diamond, ultra wear eguzogide ma na-adịte aka, dị mma maka ngwa ngwa ike egweri. Ọsọ ọsọ na-egweri ngwa ngwa, arụmọrụ abrasive dị elu na mkpọtụ dị ala.
Trapezoid concrete egweri akpụkpọ ụkwụ na okpukpu abụọ gburugburu akụkụ
Nke a trapezoid okpukpu abụọ gburugburu akụkụ diamond egweri akpụkpọ ụkwụ bụ tumadi haziri maka egweri ihe na terrazzo ala. Amara ya site na ịrụ ọrụ dị elu yana ogologo ndụ dị elu. A na-enwe njikọ dị iche iche iji kwado ala cocrete siri ike dị iche iche
Triple metal diamond magnetik akụkụ ihe n'ala egweri akpụkpọ ụkwụ
Triple metal diamond magnetik akụkụ ihe n'ala egweri akpụkpọ ụkwụ, ibu eyi na-eguzogide & ogologo ndụ. Ngwa ngwa-egweri, arụmọrụ dị elu na obere mkpọtụ. Dị iche iche agbụ maka dị iche iche hardness nke ihe ala. Anyị na-enyekwa ọrụ nhazi iji mezuo ihe ọ bụla chọrọ.
2-M8 Concrete n'ala na-egweri akpụkpọ ụkwụ nwere akụkụ diamond 3
3 diamond segments with grains, being more sharp ,Aggressive and more wear-resistantThe iche metal bonds diamond segments for different hardness of concrete floor.Grits from 6# to 400# available. Anyị na-enyekwa ọrụ nhazi iji mezuo ihe ọ bụla chọrọ.
Concrete Floor Diamond egweri akpụkpọ ụkwụ metal Bond Trapezoid egweri diski maka ala grinder
A na-ejikarị ha eme ihe maka egweri ihe na ala terrazzo. Nke anyị pụrụ iche chepụtara diamond egweri akụkụ nwere elu mkpokọta nke ulo oru ọkwa diamonds jikọtara ya na a pụrụ iche ngwakọta nke metal powders napụta kacha arụmọrụ na kasị ala egweri.